२१ बर्षिय गर्भबती युवती बन्द कोठामा भोक भोकै, रुदै भन्छिन्- खाना नपाए पेटको बच्चा मर्छ, अब बाच्दीन होला (भिडियो सहित) – Classic Khabar
महामारीका समयमा दैनिक ज्यादारी गरेर खानेहरुको विजोग भएको छ । सामाजिक सजालमा अहिले एक जोडीको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जहाँ युवती गर्भवती छन् । उनले दुई दिन देखि खान नपाएको बताउँछिन् । भिडियोमा उनका पति पनि संगै छन् । अस्ती दुई दिन भोकै बस्यौं कुनै उपाय छैन गर्भवती श्रीमतीलाई कसरी जोगाउने ? उनी निकै चिन्तित देखिन्छन् ।
गर्भवती युवती भन्छिन्, निकै पेट दुखेको छ , अलिकति पैसा भए खानेकुरा किन्न हुन्थ्यो । अहिले त यस्तो अवस्था छ सन्तान जन्मिएपछि कसरी हुर्काउने होला ? निकै चिन्ता लागेको छ । गर्भवती अवस्थामा पोशिलो खानेकुरा खानुपर्ने अवस्थामा उनले दुई छाक खाना पनि खान पाएकी छैनन् । उनीहरु दैनिक ज्यालादारी गरेर भोक मेटाउने परिवार हो ।
भएको दिन एक छाक खाना बनाउँछौं दुई जनाले बाँडेर खान्छौं । अहिले सम्म कोठामा भएको खानेकुरा सकियो । दुई दिन देखि केही खान पाएका छैनौं त्यही भएर तपाईहरुलाई बोलाएका हौं, हामी अब कसरी बाँच्ने होला ? उनले रुँदै भने । भदौको दोस्रो साता सुत्केरी हुने मिति डाक्टरले दिएको छ ।
७ महिनाको गर्भवती श्रीमतीलाई पेटभरी खान पनि दिन नसक्दा श्रीमान निकै चिन्तित छन् । कम्तिमा लकडाउन नभए काम गरेर भएपनि कमाएर श्रीमतीलाई खुवाउँथे । काम गर्न पाएको छैन । घर बनाउने ठाउँमा मिस्त्रीको काम गर्ने श्रीमान अहिलो लकडाउनका कारण काम बन्द भएका कारण उनीहरुको आम्दानी रोकिएको उनको भनाई छ ।
Prevप्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोश पोख्दै कमेडियन आदर्श – मेरो बाउले चलाको स्कुल हेर र तिम्ले चलाको देश हेर, अलिकति पनि लाज लाग्दै ? (भिडियो सहित)
Nextआफ्नै छोरीलाई खु कु री देखाएर ४० बर्ष जेठो र ७ वटा सौता माथि विवाह गरिदिने यी कस्ता बाबु ? (भिडियो सहित)-
४२ वर्षीय वर्षा दर्जीलाई कु,टपिट भएको पाँच दिनपछि मात्र पीडक नेपाल पक्राउ